शंख किन बजाइन्छ ? यस्तो छ लाभ – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/शंख किन बजाइन्छ ? यस्तो छ लाभ
पूजापाठ गर्दा होस् वा कुनै धार्मिक समारोहमा, शंख बजाइन्छ । शंख किन बजाइएको होला ? सायदैले चासो राखेका होलान् । किनभने यसलाई परम्परा मानेर हामी केवल अनुसरण गरिरहेका छौं । यद्यपी शंख बजाउनुको खास अर्थ, महत्व र फाइदा छ ।
३. शंख बजाउँदा फोक्सोको व्यायाम हुन्छ । दमका रोगीलाई बेलुन फुक्न लगाएर जुन किसिमको उपचार विधी अपनाइन्छ, त्यसैगरी शंख फुकेर पनि श्वासप्रश्वास क्रियालाई चुस्त राख्न सकिन्छ ।
यदि तपाईलाई कब्जियत छ भने शंखमा पानी भरेर राख्नुपर्छ, बिहान खाली पेट उक्त पानी सेवन गर्नाले कब्जियत ठीक हुन्छ ।आँखाको स्वस्थ्यका लागि आँखालाई लामो समयसम्म निरोगी एवं स्वस्थ्य राख्नका लागि एक रातभर शंखमा राखेको पानीले आँखा धुनुपर्छ
अनुहारको सुन्दरताको लागि शंखमा राखिएको पानीले अनुहारमा मसाज गरियो भने यसले अनुहारमा प्राकृतिक चमक ल्याउँछ ।केसका लागि शंखमा राखिएको पानीलाई गुलाब जल मिसाएर केस धुनुपर्छ, केस बलियो, मुलायम र बाक्लो हुन्छ ।